Amagqwetha ethutyana kwi-Netherlands - Law & More
Ngaba ufuna igqwetha ngaphakathi kwinkampani yakho okwethutyana? Qiniseka ukuba inkampani yakho inenkxaso yomthetho eyoneleyo kunye nomnxeba kwityala lethutyana elivela Law & More kwangoko. Isizathu sokuqeshwa kwegqwetha lethutyana kwahlukile kwinkampani nganye. Kungenzeka ukuba unotshintsho ngaphakathi kwinkampani yakho, umsebenzi ogulayo, ufuna ukubamba umsebenzi ongaphezulu okanye ufuna ukuqinisekisa ukuba iprojekthi ihamba kakuhle.
NGABA UYAJONGA UMNIKI-MALI NGOKUGQIBELA WOKUGQIBELA?
Ngaba ufuna igqwetha ngaphakathi kwinkampani yakho okwethutyana? Qiniseka ukuba inkampani yakho inenkxaso yomthetho eyoneleyo kunye nomnxeba kwityala lethutyana elivela Law & More kwangoko. Isizathu sokuqeshwa kwegqwetha lethutyana kwahlukile kwinkampani nganye. Kungenzeka ukuba unotshintsho ngaphakathi kwinkampani yakho, umsebenzi ogulayo, ufuna ukubamba umsebenzi ongaphezulu okanye ufuna ukuqinisekisa ukuba iprojekthi ihamba kakuhle. Zonke iintlobo zeengxaki ezahlukeneyo zinokusonjululwa ngokuqesha igqwetha lethutyana Law & More. Ezi ngxaki zinokubangela ukuba inkampani yakho ingenzi ngokupheleleyo kwaye inokuba neziphumo ezibi. Eyona njongo iphambili yokuqesha igqwetha lethutyana kukuqinisekisa umgangatho wenkampani yakho. Oku kunokwenzeka kuba unika ukujonga okutsha kunye nokutsha kwinkampani yakho. Kuba igqwetha linokwenza izigqibo ezizimeleyo ngokulula, akukho mfuneko yokuba ulinde ixesha elide ukwenza ukhetho.
Ukuqasha igqwetha lethutyana
Thina Law & More ndiyakholelwa ukuba kubalulekile ukuba kubekho into oyenzayo xa uqesha igqwetha lethutyana. Yiyo loo nto sinamagqwetha anamava eminyaka nawo anolwazi olukhethekileyo lwegqwetha, ukuze ubathumele kwangoko. Umzekelo, ingaba uza kuqala iprojekthi, ngaba ucwangcisa ukulungiswa ngokutsha okanye uthatha ikhefu lethutyana lokungabikho? Emva koko fowunela enye Law & MoreAmagqwetha ethutyana.
Thetha isicwangciso sokusebenza esifanelekileyo.
Uyabandakanyeka kwaye unokubonakalisa uvelwano
nengxaki yabathengi ”
Xa uqesha igqwetha lenkampani yethutyana, kubalulekile ukuba igqwetha eli lingasasazwa ngexesha elifutshane. Si- Law & More Zabalazela ukuqinisekisa ukuba abameli bethutyana benkampani banokuhanjiswa ngesaziso esifutshane kwinkampani yakho, ukuze uqhubeke nokusebenza ngaphandle kokuphazamiseka. Amagqwetha e Law & More ukuncedisa kwinkqubo yomthetho yemihla ngemihla, kodwa bayakwazi nokwenza umsebenzi olindelwe ligqwetha elisebenza ngobuchule. Ngapha koko, iingcali zethu zinokusebenzisana kunye nesebe lezomthetho kunye nabanye abacebisi bakho bangaphakathi nangaphandle, kodwa banokufumana iiprojekthi eziphambili kwinkampani yakho kwaye banikeze neengcebiso ezizimeleyo. Ngaba uyayifuna igqwetha lethutyana? Ke nceda unxibelelane namagqwetha kwa Law & More.
Kutheni uqesha igqwetha lethutyana ukuba liphume Law & More?
Abameli bethutyana ba Law & More sele zikwinqanaba lolwazi
Musa ukushiyeka emva emsebenzini kwaye uqeshe igqwetha lethutyana
Amagqwetha ethu exeshana anolwazi lwegqwetha
Bamba umsebenzi ogqithileyo njengoko amagqwetha ethuyana enokuthunyelwa kwangoko